IFTIINKACUSUB.COM: “Hellow, hellow, naayaa maxaadan ii ga qabaneyn Teleefoonka?!
“Hellow, hellow, naayaa maxaadan ii ga qabaneyn Teleefoonka?!
Aniga oo dhex muquuraya bad weynta salalka iyo saadaasha xun, ayuu iga soo wacay teleefoonka. Waa seq dhexe xilligu, dad iyo duunyaba wax dhaqdhaqaaqaya ma jiraan. Sariirtii baldhaca weyneed ee aan hadba doc ugu galgalanayey ayaan iska ka dul saaranahay. Hurdo kuma indha kuusho, mana dhadhansado, hilowga iyo harraadka aan u qabo muuqaalkiis awgiis.
Teleefoonkii oo dhacaya ayaan meel ii dhaw ka eegayay, aniga oo ka walwalqaba warka xilligaan ii soo yeeri doona. Xibnaha jidhkeyga oo idil wey jarcinayeen, sida qof qabow ba’an dhex fadhiya.
Gacantayda oo gariireysa ayaa waxaan qabatay teleefoonkii. Waxaan taabtay badhankii jawaabta. "Hellow, hellow, naayaa maxaadan ii ga qabaneyn Teleefoonka?! Maxaad intaas oo dhan ku maqneyd? Yaad la jiiftay caawa? Diin iyo iimaan aad leedahay ma jirto wasakhadyahay" ayuu hadal iyo wacdaal ii ga billaabay.
Erayadaas markii ey ku dhaceen maqalkeyga, waxaan dareemay qabow ku saaqay waaxyaha jidhkeyga oo idil. Sida baraf cadceed la dhigay ayan u dhalaalay. Ooyin ayaan ku dhuftay. Haa, waan is ka ooyay, waayo waa tabarta qura ee aan kaashan karo, inkastoo ragga intooda badani aaminsan yihiin in ooyinta dumarku ey astaan u tahay beenta iyo dhagarta lagu sheegay.
Meeshii aan ka filanayay in uu naxariis iyo naruuro ii muujiyo, wuxuu sii labajibbaaray canaantiisii, isaga oo igu tilmaamaya in aan Sheydaanka ka dhagar badanahay, illinta iga burqaneysana ey tahay dabool aan ku qarinayo falalka gurran ee uu igu maleynayo.
Wuu iga fog yahay, misana waa qof aad umalaxun. Haa, gogaldhaaf iyo falal xun ayuu igu tilmaami jiray. Waa dhaqan aan waligey maskaxdeyda ku soo dhicin, balse, Eebbe ku ibtaleeyay qofka aan nolasha la wadaago. Kama tagi karo, oo waan jecelahay, isagu sa wuxuu ii gu gooddiyaa in uu iga tashan doono, haddii aanan caga dhulka dhigin. Waa gartiis, oo wuxuu la liitaa xanuunka shakiga, aniguna waxaan goor walba is ku dayaa in aan nabarkaas ku yaalla saygeyga ka dhayo, hasa yeeshee, ma aaminsano dulqaadkeyga.
Erayada igu foosha xun ee uu ii adeegsado waxaa ka mid ah in aan ahay uun ka hagardaamo badan Sheydaanka, hadde waa Sheydaanka dhan ee la sheegay in uu malaayiin qof duufsado daqiiqaddii. Mararka qaar waxaan ku shallaayaa in aanan heysan awoodda sheydaankaas uu i garab dhigo had iyo jeer. Haddaan heysan lahaa, waxaan ku duufsan lahaa qalbigiisa iga sii jeeda, masa awoodi. Waa sidaas oo ey tahay, waxaan agtiisa ka ahay xuddunta sharta iyo fidno ku soo biirtay nolashiisa.
W/Q; Cabdicasiis Maxamed Shidane.
Markii aan Dawarsan jiray ayay isoo gacan qabatay!...
Waan ku Sooryaynayaa lakiin bi-shardi wax hasoo cu...
Nin ku furay xaaskiisii Cabitaanka Badeecadda!
Faras ka dul Baroortay maydkii ninkii dhaqday!
Duliyahii Diyaradda aad saarnayd haddii uu Geeriyo...
Qisso cajiib ah: Saxiib maxad dawlada kalsoonida u...
Qofka Bini'aadmiga ahi ma u dhiman kara hadal qof ...
Qisso cajiib ah:NHO-ga Magafe iyo Geeridii Hoyadii...
Qisso cajiib ah:Baafin caruurtii aan u dhalay mada...
“Hellow, hellow, naayaa maxaadan ii ga qabaneyn Te...
Ururka Al-Saacdicuuna Bil Xaq oo khilaaf horleh ka...
Shirkada Twitter-ka oo u fududaysay dadka aan hays...
Waswaaska sariirta hoosteeda kaa gala iyo sida loo...
Shakiga Cabdilaxmaan Cirro,Cabsida Muuse Biixi iyo...
Booqashadii Gudomiyaha Xisbiga Kulmiye ee gobolka ...
Gudoomiye Cirro iyo Khudbadii Berbera.
Ka tigtoonow in Tawxiidka Ilahay la isku kiin diro...
Waxan tuugsadaa(dawarsadaa) Talyaniga dhexdiisa!
Daahitaanka hadalka iyo hadala'aanta caruurta.
Guleed darxumo iyo dayaw ayuu la waashay!
Maraykanka iyo madaxdii kala gadisnayd ee soo mart...
Somaliland ma xisbiyo qaranba ka jira misse xulafa...
Sadaqo Yar oo uu Bixiyey ayaa Ka Badbaadisay Geeri...
Qisso cajiib ah:Ilayn xoro Jin ayaan soo galay!
Ma guursan lahayd gabadh Indha’la,Dhago’la,aan had...
Sirtu Waa Rajadda Iyo Mustaqbalka .W/Q: Garyaqaan ...
Shaqo tag mise shaxaad tag midkee sharafleh?
Garnaqsigii Xoolo dhaqatada iyo Kaluunka Badda !
Xaalada Abaarta ee Degmooyinka Saba-wanaag iyo Cad...
Qabiilbaa Kala Geeyaye, Kii kasaari laa Waa Kuma S...
Qisso cajiib ah : Dadku wax aanay haynin ayay ku B...
Qofka magaciisa yahay Maxamed, oo ay yartahay ,fur...
Fadhi ku dirirku ma dood-cilmiyeedbaa?
Cashuurta Caano ku bixi!
Geelu Isku Marbuu Noo Dhalaa Isku Sina Nooguma Tar...
Mobilkaaga ka ilaali in aad markasta dhigto meel k...
Kalyahayga mid ka mida ayaan iibiyay ,si aan Yurub...
Seedigaa Siyaasad haysugu imanina!
Puntiland oo dawlada Somaliya ku eedaysay in deeqa...
Falsafadda xisbiga Wadani iyo Cirro, Arin lagu daw...
Maaraynta Isbedbedelka ku Yimaadda Qiimaha Shillin...
Ayaadu ama Eedadu maxay caruurta uu ninkeedu dhala...
Aabe waaya arag ah oo tallo dhaxalgal ah siinaya w...
Toban Sababood Oo Keena Caruurtu Inay Waxbarashada...
Taariikh nololeedkii Saxaabigii boqorka ahaa Najaa...
Ka-faa’iidaysiga Biyaha Roobka iyo Xakamaynta Gaaj...
Ibliis hadii naar laga abuuray maxaa naar loogu ca...
Haweeney iyada oo nool loo diiwaan geliyey inay ge...
Qisso cajiib ah : Wuu I furay, Qaybtii 3-aad ee u ...
Kalyahayga mid ka mida ayaan iibiyay si aan Yurub ...
Farxad iib ah yaa hayya ?
Qisso cajiib ah : Wuu i furay !! Qaybtii 2-aad.
Qisso cajiib ah : Wuu I furay, Qaybtii 1-aad !!
Isma-ogide isku noqo.
Qisso cajiib ah : Beenta aad caruurtada bartaa dib...
Tix gabay ah :Wiil miskaha leexleexinaya oo cawrad...
Kalyahayga mid ka mida ayaan iibiyay si aan Yurub...
Qisso cajiib ah: Markaan Qaadkii ku mirqaamay ayaa...
TACSI TIIRAANYO LEH.